Madaxweyne Obama oo ka hadlay Fadeexadda FIFA – Radio Daljir
Juunyo 9, 2015 3:11 b 0
Talaado, Juun 09, 2015 (Daljir) — Madax waynaha dalka Maraykanka ee Barack Obama ayaa kadib markii uu soo dhamaaday shirkii G7 ee dalalka hore uga maray warshadaha ayaa ka ka hadlay musuq maasuqa FIFA inkasta oo uu xoog uga gaabsaday inuu si faah faahsan uga hadlo.
Iyada oo xeer ilaaliyaha guud ee USA iyo FBI-du ay wadaan baadhitaan ka dhan ah fadeexda FIFA ayuu Obama sheegay in FIFA u baahan tahay maamulka ugu fiican ee ugu sareeya iyo in sharaf iyo isla xisaabtan lagu maamulo.
Obama ayaa yidhi: “Waxaynu doonaynaa in aynu hubino in kubbada cagta , ciyaaraha, ganacsiyada waa wayn iyo isha sharafeed ee aan la rumaysan karin in loo maamulo hanaanka ugu sareeya. Waa in lagu maamulo sharaf, isla xisaabtan iyada oo wax kastaaba cad yihiin”.
Todobaadkii hore ayuu afhayeen u hadlay Obama oo magiciisa la yidhaa Josh Earnest uu sheegay in FIFA ay ka faa’iidaysan doonto hogaamiyaha cusub. Earnest ayaa yidhi: “Iscasilaada Blatter waxay FIFA fursad u siinaysaa inay sumcadeeda horumariso”.
Iyada oo FIFA ku jirto arin murugo leh oo maalin kasta ay soo baxayso fadeexad cusub ayaa sidoo kale Maraykanka iyo wadamada ree Galbeedka lagu eedeeyay inay arinta ka badbadinayaan oo ay ka soo horjeedaan in dalalka Ruuska iyo Qatar ay marti galiyaan koobabka aduunka ee 2018 iyo 2022 sida ay ukala horeeyaan.